Indlu yeWee - I-Airbnb
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJenny
Wamkelekile ngokufudumeleyo, uhlala ulinde wena kwiflethi yosapho lwethu. Kukho amakhonkco ama-2 e-ceramic hob aneoveni yemicrowave, ekunika ithuba lokutya okanye utyele ngaphandle. Igumbi lokuhlambela elikwi-en-suite, itv, ibhedi yesofa ephindwe kabini kunye nebhedi enye. Ilinen kunye neetawuli zinikezelwe.
Le ndlu ibekwe kanye elunxwemeni inezinye zezona mbono zimangalisayo kwaye ezinye zeendwendwe zethu zibe nethamsanqa ngokwaneleyo lokufumana umbono omangalisayo weZibane zaseMantla. Le ndlu ilala abantu aba-2 ngokukhetha ibhedi yesofa kunye / okanye ibhedi enye. Ivenkile kunye nehotele yendawo enikezela ukutya kukuhambo olufutshane ukusuka kwigumbi.
Sinento esiza kuyinika wonke umntu nokuba kungenxa yokubaleka kwezothando okanye impelaveki yokuzonwabisa. Sinolunye lolona lwandle lubalaseleyo lwesanti, ezinye zezona zibalaseleyo zokusefa, iindawo ezinkulu zokukhwela inqanawa, ukuhamba endulini, i-loch kunye nokuloba elwandle zifumaneka ngokulula. UBen Loyal kunye noBen Hope banikezela ngeyona ndawo ibukekayo kwaye ilungile kubahambi benduli. Le ndawo ibonelela ngamathuba amahle okubukela iintaka, izilwanyana zasendle kunye nokuthanda iintyatyambo ezinqabileyo zaseScottish. Sihamba ngemizuzu emi-5 ukusuka kwi-pub yendawo kwaye kukho ivenkile imizuzu emi-2 kude.
Sikwafikeleleka lula kwabo bahamba nge-NC 500
Sifumaneka ngokulula kulo naluphi na uncedo, inkxaso okanye iingcebiso ozifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Ngenxa ye-covid sinciphisa ukunxibelelana nobuso kodwa sihlala sizimisele ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho